အလုပ်ထဲက စကီလေးကို ဘယ်လိုပိုးပန်းရမလဲ
14 Feb 2018 . 5:55 PM
အချစ်ဆိုတာ အမှတ်မထင်ဘဲ တွေ့ကြုံနိုင်သလို မြင်ရဖန်များလွန်းလို့ ချစ်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ နေ့တိုင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုမှ ချစ်မိသွားရင်တော့ စဉ်းစားရခက်လာပါတယ်။ အထက်လူကြီးတွေလည်း မသိအောင် ကိုယ့်ကောင်မလေးလည်း ပြန်ကြိုက်လာအောင် ဘယ်လိုကြံအောင်ရမလဲဆိုတာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) ရုံးချိန်ပြင်ပမှာ ကြိုးစားပါ။
Crush နဲ့ ရင်းနှီးလာအောင် ကြိုးစားတာပဲဖြစ်ဖြစ် စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် မုန့်ဆိုင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရုံးချိန်ပြင်ပမှာပဲ အားထုတ်ပါ။ ရုံးချိန်အတွင်းမှာ သာမန်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိုပဲ ဆက်ဆံတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ရုံးဆင်းတာနဲ့ သူနဲ့အတူပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကားမှတ်တိုင်အထိ လိုက်ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နည်းနည်းနဲ့ ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ။
(၂) ရုံးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ပေးပါ။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို ပိုးပမ်းရတဲ့ အဓိကအားသာချက်က အနေနီးတာပဲ၊ အားနည်းချက်က တခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ရိပ်မိမှာစိုးရတာ။ အဲဒီတော့ အနေနီးတဲ့ အားသာချက်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချဖို့တော့ လိုမယ်နော်။ ဝန်ထမ်းတွေ အားလုံးပါတဲ့ ဒင်နာမျိုးမှာ ပူးပေါင်းပြီး Crush နဲ့ ရင်းနှီးအောင် လုပ်ပါ။ Crush ရဲ့အမြင်မှာ ကိုယ်ဟာ တက်ကြွတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်ပါစေ။
(၃) သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့။
ရုံးချိန်အတွင်းမှာ Crush ကို ဖွန်တအား မကြောင်လေနဲ့။ တခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ သိသွားတာ အရေးမကြီးလှပေမယ့် အထက်လူကြီးသိသွားရင် နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် မကောင်းလှဘူး။ အဲဒီတော့ ရုံးချိန်အတွင်းမှာ ဆတ်စလူး ပျားတုပ်မဖြစ်စေနဲ့။ တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ်ကြိုက်နေတာ တခြားလုပ်ဖော်ကိုက်ဖက်တွေ ရိပ်မိနိုင်ပေမယ့် ‘သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့’ ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပဲ သူတို့ရှေ့မှာတော့ ‘ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ’ ပဲလုပ်တာက အကောင်းဆုံးပါ။
(၄) လူမှုကွန်ရက်အပေါ်မှာ မသိသာစေနဲ့။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားလူတွေ ရိပ်မိနိုင်တဲ့ စာသားတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် လူမှုကွန်ရက်မှာ မတင်မိတာက အကောင်းဆုံးပါ။ ကိုယ့်အတွက်လည်း Professional မဆန်တဲ့ အပြုအမူတစ်ခုလည်း ဖြစ်သွားနိုင်သလို အထက်လူကြီးတွေလည်း အမျက်တော်ရှနိုင်ပါတယ်။
(၅) အပြစ်ရှိတယ်လို့ မခံစားလိုက်ပါနဲ့။
အလုပ်ရှင်တွေက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း ရည်းစားဖြစ်သွားရင် ကြိုက်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အလုပ်ကို အာရုံမစိုက်မှာစိုးလို့ရယ်၊ တစ်ယောက်အလုပ်ထွက်သွားရင် နောက်လူပါ လိုက်ထွက်မှာစိုးလို့ပါ။ တကယ်တော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကို ချစ်မိတာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်နဲ့အချစ်ရေးကို ခွဲခြားသိမြင်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ။ အလုပ်ချိန်မှာ အလုပ်ပဲ အာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင် ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။
ကဲ . . . အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကို ချစ်မိရင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ တင်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
အလုပျထဲက စကီလေးကို ဘယျလိုပိုးပနျးရမလဲ
အခဈြဆိုတာ အမှတျမထငျဘဲ တှကွေုံ့နိုငျသလို မွငျရဖနျမြားလှနျးလို့ ခဈြသှားတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ တကယျလို့ နတေို့ငျးမွငျတှနေ့ရေတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျကိုမှ ခဈြမိသှားရငျတော့ စဉျးစားရခကျလာပါတယျ။ အထကျလူကွီးတှလေညျး မသိအောငျ ကိုယျ့ကောငျမလေးလညျး ပွနျကွိုကျလာအောငျ ဘယျလိုကွံအောငျရမလဲဆိုတာ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
(၁) ရုံးခြိနျပွငျပမှာ ကွိုးစားပါ။
Crush နဲ့ ရငျးနှီးလာအောငျ ကွိုးစားတာပဲဖွဈဖွဈ စကားပွောတာပဲဖွဈဖွဈ မုနျ့ဆိုငျသှားတာပဲဖွဈဖွဈ ရုံးခြိနျပွငျပမှာပဲ အားထုတျပါ။ ရုံးခြိနျအတှငျးမှာ သာမနျလုပျဖျောကိုငျဖကျလိုပဲ ဆကျဆံတာက ပိုကောငျးပါတယျ။ ရုံးဆငျးတာနဲ့ သူနဲ့အတူပွနျတာပဲဖွဈဖွဈ ကားမှတျတိုငျအထိ လိုကျပို့တာပဲဖွဈဖွဈ တဈနညျးနညျးနဲ့ ကွိုးစားကွညျ့လိုကျပါ။
(၂) ရုံးပြျောပှဲရှငျပှဲတှမှော ပါဝငျပေးပါ။
လုပျဖျောကိုငျဖကျကို ပိုးပမျးရတဲ့ အဓိကအားသာခကျြက အနနေီးတာပဲ၊ အားနညျးခကျြက တခွားလုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ ရိပျမိမှာစိုးရတာ။ အဲဒီတော့ အနနေီးတဲ့ အားသာခကျြကို ကောငျးကောငျးအသုံးခဖြို့တော့ လိုမယျနျော။ ဝနျထမျးတှေ အားလုံးပါတဲ့ ဒငျနာမြိုးမှာ ပူးပေါငျးပွီး Crush နဲ့ ရငျးနှီးအောငျ လုပျပါ။ Crush ရဲ့အမွငျမှာ ကိုယျဟာ တကျကွှတဲ့လူတဈယောကျဖွဈကွောငျး ပျေါလှငျပါစေ။
(၃) သိသာသိစေ မမွငျစနေဲ့။
ရုံးခြိနျအတှငျးမှာ Crush ကို ဖှနျတအား မကွောငျလနေဲ့။ တခွားလုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ သိသှားတာ အရေးမကွီးလှပမေယျ့ အထကျလူကွီးသိသှားရငျ နှဈယောကျစလုံးအတှကျ မကောငျးလှဘူး။ အဲဒီတော့ ရုံးခြိနျအတှငျးမှာ ဆတျစလူး ပြားတုပျမဖွဈစနေဲ့။ တဈခါတလမှော ကိုယျကွိုကျနတော တခွားလုပျဖျောကိုကျဖကျတှေ ရိပျမိနိုငျပမေယျ့ ‘သိသာသိစေ မမွငျစနေဲ့’ ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပဲ သူတို့ရှမှေ့ာတော့ ‘ပိုနမွေဲ ကြားနမွေဲ’ ပဲလုပျတာက အကောငျးဆုံးပါ။
(၄) လူမှုကှနျရကျအပျေါမှာ မသိသာစနေဲ့။
လုပျဖျောကိုငျဖကျတဈယောကျကို ခဈြမိတဲ့အကွောငျးနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ တခွားလူတှေ ရိပျမိနိုငျတဲ့ စာသားတဈခုပဲဖွဈဖွဈ လူမှုကှနျရကျမှာ မတငျမိတာက အကောငျးဆုံးပါ။ ကိုယျ့အတှကျလညျး Professional မဆနျတဲ့ အပွုအမူတဈခုလညျး ဖွဈသှားနိုငျသလို အထကျလူကွီးတှလေညျး အမကျြတျောရှနိုငျပါတယျ။
(၅) အပွဈရှိတယျလို့ မခံစားလိုကျပါနဲ့။
အလုပျရှငျတှကေ လုပျဖျောကိုငျဖကျအခငျြးခငျြး ရညျးစားဖွဈသှားရငျ ကွိုကျကွမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အလုပျကို အာရုံမစိုကျမှာစိုးလို့ရယျ၊ တဈယောကျအလုပျထှကျသှားရငျ နောကျလူပါ လိုကျထှကျမှာစိုးလို့ပါ။ တကယျတော့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတဈယောကျကို ခဈြမိတာ အပွဈမဟုတျပါဘူး။ အလုပျနဲ့အခဈြရေးကို ခှဲခွားသိမွငျဖို့ပဲ အရေးကွီးတာပါ။ အလုပျခြိနျမှာ အလုပျပဲ အာရုံစိုကျမယျဆိုရငျ ဘာပွဿနာမှ မရှိပါဘူး။
ကဲ . . . အခုဖျောပွခဲ့တဲ့ အခကျြတှကေ လုပျဖျောကိုငျဖကျတဈယောကျကို ခဈြမိရငျ ဘယျလိုလုပျဆောငျရမယျဆိုတာ တငျဆကျသှားတာဖွဈပါတယျ။ အခဈြရေးမှာ အဆငျပွကွေပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျရပါတယျ။